Viber inogadziridzwa nekuwedzera ipapo vhidhiyo mameseji | IPhone nhau
Munyika yekutumira mameseji, kwete zvese zviri WhatsApp neTeregiramu. Parizvino pamusika tinogona kuwana zvimwe zvinoshandiswa chaizvo izvo zvinoshanda vanozadzisa mashandiro akafanana neaya makuru maviri andataura pamusoro. Mutsetse, WeChat kana Viber ari mameseji maficha ayo anoshandiswa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo dzepasi uye ari kunetseka kuwedzera kune vamwe. Viber, semuenzaniso, inogona kunge iri isingazivikanwe kunyangwe iri imwe yevakuru pamusika, inoshandiswa zvakanyanya munyika dzeArabhu, uko WhatsApp kana Teregiramu isati yapedza kukoloni nzvimbo idzodzo.
Parizvino Viber ine vanopfuura mamirioni mazana manomwe evashandisi pasi rese. Iyi mameseji chikuva yakawedzera zvishoma nezvishoma mashandiro ayo uye pari zvino inotibvumidza kuti tifonere kune nhare dzenhare kana nhare mbozha, kuita vhidhiyo yekufona mu HD mhando, kugovana mafaera muGIF fomati, zvakare ine zvimiti (kunyangwe mazhinji ari ekubhadhara)… Viber ine yakagadzirisa mashandisiro ayo nekuwedzera matsva maficha ave akareba kuwanikwa muSkype, senge mukana wekutumira vhidhiyo mameseji anosvika makumi matatu masekondi kune vatinoshamwaridzana navo, mukana wekutaura mukutaura kuburikidza nechiratidzo kana kutsvaga zvemukati ...
Iyi nyowani nyowani inotipawo kugadziriswazve kwekushandisa kunoratidza mamwe mamonikisi akaiswa kumeso, pamusoro pekutipa isu saizi yakati kurei kupfuura yeshanduro yapfuura. Uye zvakare, ivo vatorawo mukana wekuwedzera huwandu hwevanhu vanogona kutora chikamu muchikwata chehurukuro, kukwidza huwandu kusvika kuvanhu mazana maviri nemakumi mashanu.
Chii chitsva muViber vhezheni 6.5.5
Instant vhidhiyo mameseji: refu tora iyo yekukurumidza vhidhiyo icon, kutora iyo nguva ne 30-yechipiri mavhidhiyo, kusunungura kutumira.
Chat extensions: Tsvaga uye ugovane zvirimo online, kubva pane yako chat skrini. Sarudza iyo "@" icon, tsvaga zvemukati uye ugogovana zvakananga kubva pamhedzisiro, nekungobata kamwe chete. (Ongorora zvirimo ne 3D Kubata, inongowanikwa chete pa iPhone 6s uye neshanduro dzekupedzisira)
Yakagadzirwazve Emoticons - Emoticons edu ane nyowani kutaridzika kutsva!
Makuru makurukuriro eboka: Iwe unogona ikozvino kuwedzera anosvika mazana maviri nemakumi mashanu evanhu kuita group chats.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Viber inozvivandudza pachayo nekuwedzera pakarepo mavhidhiyo mameseji
Mitambo nemaapplication emahara kana pakutengeswa kwenguva shoma